May 2, 2020 - Lupyo News
အမေ့ထက် ၈ နှစ်ကြီးတဲ့ ၅၈ နှစ်အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်ယူခဲ့တဲ့ ၁၉ နှစ်သား မြန်မာ လူငယ်လေး
May 2, 2020 by Lupyo News
အမေ့ထက် ၈ နှစ်ကြီးတဲ့ ၅၈ နှစ်အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်ယူခဲ့တဲ့ ၁၉ နှစ်သား မြန်မာ လူငယ်လေး ပရိသတ်ကြီးရေ အချစ်မှာ မျက်စိမရှိဘူးတဲ့ လက်ခံသူတွေ ရှိမှာပါနော်ခုပြောပြမယ့်အကြောင်းလေး ကြားရင်ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အချစ်ဟာ ထူးဆန်းလိုက်တာလို့ ထင်သွားကြမှာပါပဲ…. အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ယောက်ကျားလေးဟသူ့အမေထက် ၈ နှစ်ပိုကြီးတဲ့ ၅၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပါပဲချမ်းသာ ဆင်းရဲ ငယ်သည် ကြီးသည်လှတာ မလှတာ အရေးမကြီးဘူးဆိုတာ တကယ့်အချစ်စစ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြသွားသလိုပါပဲ…. လူမှုကွန်ရက်မှာ ခုလို ဖော်ပြထားတဲ့ အဲဒီအကြောင်းလေးကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒါဟာ အချစ်တဲ့လား အဲဒါအချစ်တဲ့လားသတို့သားက (၁၉)နှစ် မောင်သန်းတိုးအောင် (ရွာ) သတို့သမီး (၅၈)နှစ် မစန်းစန်းဌေး(ကြံခင်းမြို့)မှတ်ချက်သတို့သားအမေထက် သတို့သမီးက ၈ နှစ် ကြီးသည်။” —————————- unicode … Read more
အသည်းတစ်သောင်းပိုင်ရှင်KTV ဘုရင်မရဲ့ ပြုစားချက်ကြောင့် အချစ်နွံနစ်သွားတဲ့ ၁၈ နှစ်သားလေး
အသည်းတစ်သောင်းပိုင်ရှင်KTV ဘုရင်မရဲ့ ပြုစားချက်ကြောင့် အချစ်နွံနစ်သွားတဲ့ ၁၈ နှစ်သားလေး ပြည်မြို့တည်ခိုခန်းတွင် လုပ်စားနေတဲ့ KTV ဘုရင်မရဲ့မြူစွယ်မှုကြောင့် အချစ်ကျွံပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ.. အချစ်နွံနစ်သွားတဲကောင်လေးက ၁၈ နှစ်သားလေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် အသက်ငယ်တဲ့လူငယ်လေးတွေဆိုတာ အချစ်ကိုဘ၀လို့ထင်တတ်ကြပါတယ် မိဘတွေကလဲ ဒီလိုအသက်အရွယ်လေးတွေကို အထူးဂရုစိုက်ကြရပါမယ်….. မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကစားတတ်ကာစ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေကို ဂရုစိုက်ထိန်းကျောင်းကြစေချင်ပါတယ်ဗျာ…. —————————- Unicode အသည်းတစ်သောင်းပိုင်ရှင်KTV ဘုရင်မရဲ့ ပြုစားချက်ကြောင့် အချစ်နွံနစ်သွားတဲ့ ၁၈ နှစ်သားလေး ပွညျမွို့တညျခိုခနျးတှငျ လုပျစားနတေဲ့ KTV ဘုရငျမရဲ့မွူစှယျမှုကွောငျ့ အခဈြကြှံပွီး အသကျပါပေးလိုကျရပါတယျဗြာ.. အခဈြနှံနဈသှားတဲကောငျလေးက ၁၈ နှဈသားလေးဖွဈတယျလိူ့ သိရပါတယျ ပွညျမွို့တညျခိုခနျးတှငျ လုပျစားနတေဲ့ KTV ဘုရငျမရဲ့မွူစှယျမှုကွောငျ့ အခဈြကြှံပွီး အသကျပါပေးလိုကျရပါတယျဗြာ.. အခဈြနှံနဈသှားတဲကောငျလေးက ၁၈ နှဈသားလေးဖွဈတယျလိူ့ သိရပါတယျ အသကျငယျတဲ့လူငယျလေးတှဆေိုတာ အခဈြကိုဘဝလို့ထငျတတျကွပါတယျ … Read more
မိန်းမသားတွေ ထားသင့်တဲ့ မာန
မိန်းမသားတွေ ထားသင့်တဲ့ မာန ဖတ်ကြည့်နော်… ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အရည်အချင်းမရှိတဲ့ ယောက်ျားကို လက်မတွဲသင့်ပါဘူး။ အဆင်မပြေလို့ပါဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အဘိုးအရွယ်တွေကို မောင်မခေါ်ချင်ပါနဲ့။ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် အိမ်ထောင်တစ်ခု သာယာအောင် မဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလည်း မမက်မောပါနဲ့။ ချမ်းသာချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် ငွေတွေနဲ့ ကိုယ့်ဘဝကို မရောင်းလိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် ထက်မြက်တဲ့မိန်းမဖြစ်အောင်ပဲ ကြိုးစားသင့်တာ မိန်းမသားတွေရဲ့ မာနပါ။ မိန်းမသားတစ်ယောက်လောက်မှ အရည်အချင်းမရှိတဲ့ ယောက်ျားကို မမက်မောတာဟာ ငွေမက်လို့ ဂုဏ်မက်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမသားတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ ကျဆင်းစေလို့ပါ။ အရည်အချင်းမရှိသူကို လက်တွဲပြီး ဘဝကို ဖြတ်သန်းမဲ့ အစား တက်စွမ်းသမျှ ခွန်အားနဲ့ တစ်ကိုယ်တည်း နေကြည့်လိုက်ပါ။ Credit •••• အရှင်ပုည( ဝကုန်း ) ———————– 💙အချစ်ကို ဗန်းပြပြီး … Read more
၂၄ နာရီအတွင်း လေဖိအားနည်း ဖြစ်ပေါ်ပြီး ၄ ရက်နေ့ မုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည်
၂၄ နာရီအတွင်း လေဖိအားနည်း ဖြစ်ပေါ်ပြီး ၄ ရက်နေ့ မုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည် ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုကာလမှာ မုန်တိုင်းသတင်းတွေကြောင့် အားလုံးက မိုးလေဝသ သတင်းတွေကိုမပြတ်စောင့်ဖတ်နေကြပါတယ်… မိုးလေဝသဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းတွေသာမက မိုးလေဝသ ပညာရှင်တွေရဲ့ သတင်းတွေကိုပါနားစွင့်နေကြတာပါ… ခု လာမယ့် ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ သတင်းလေးကို ပရိသတ်ကြီးတို့သတိထားနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်… “၂၀၂၀ မေလ ၁ရက်နေ့…နောက်၁၂နာရီမှ ၂၄နာရီအတွင်း ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတွင်လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်… ၃ရက်နေ့အတွင်း အနောက်မြောက် မြောက် အန်ဒမန်ကျွန်းအနီး ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ဘင်္ဂလာပင်လယ်ပြင်မှ၎ရက်နေ့မှစတင်ကာ အရှေ့မြောက်ဖက် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဆီသို့ ဦးတည်နိုင်ပါတယ်… ဒါကြောင့် အားလုံးပဲ သတိထားနိုင်ပြီး မိုးလေဝသ သတင်းတွေကို မပြတ်ဖတ်ပေးကြပါနော်.. Writer ; Kwee (Jeeptoolay) Source ; … Read more
မိန်းကလေးတိုင်း လိုက်မလုပ်နိုင်တဲ့ BOOBIES SHAKE CHALLENGEကို အမိုက်စားလုပ်ပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဗီဒီယို
မိန်းကလေးတိုင်း လိုက်မလုပ်နိုင်တဲ့ BOOBIES SHAKE CHALLENGEကို အမိုက်စားလုပ်ပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဗီဒီယို မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပြိုင်ဖက်ကင်း အောင်မြင်သူလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူမရဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးက ပရိသတ်တွေအားလုံးကို ယစ်မူးသွားစေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကလည်း သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အသစ်အသစ်သော လှုပ်ရှားမှုတွေကို ချပြဖို့ အမြဲတမ်း ကြိုးစားထားနိုင်သူလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း အားကစားပြုလုပ်ပြီး ကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က ဒီနေ့မှာတော့ မိန်းကလေးတိုင်း လိုက်မလုပ်နိုင်တဲ့ Boobies Shake Challenge ကို လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်က ဒီ Challenge ကို ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာတော့ ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပြနိုင်မယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ တော်ရုံမိန်းကလေးတိုင်း လိုက်မလုပ်နိုင်တဲ့ Boobies … Read more
လူသေကို အသက်သွင်းကြသူများနှင့် သေရွာပြန် ဦးလေးကြီး အချိန်ကား ည တစ်နာရီ စကားပြောရင်းပင် ဦးလေးကြီး မောကြပ်လာသည်။ နဂိုရောဂါအခံ ကျောက်ကပ်မကောင်း သွေးတိုးဆီးချို နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းများ လည်း ဆေးရုံမှာ သေချာပြန်မပြဖြစ်တာကြာပြီ နီးစပ်ရာဆေးခန်းမှာပဲ အဆင်ပြေသလို ကုလိုက် နေလိုက်နဲ့။ အခုတော့ မောရင်းမောရင်း ပိုမေါလာပြီ ဆေးရုံသွားရင်းပင် အမောဖောက်ကာ သတိလစ်သွားပြီ။ဖီဖီတိူ့ မြောက်ဥက္ကလာ အရေးပေါ်ရောက်တော့ မနက် နှစ်နာရီ လူနာဦးလေးကြီးကား အသက်မရှူတော့ နှလုံးမခုန်တော့. နှလုံးနှိုးစက်ဖြင့် စမ်းသပ်ကြည့်တော့ ….. အသက်မရှိတော့ သို့ပေမယ့်လည်း အရေးပေါ်အထူးကုတာဝန်က ဒါမျိုးလူနာတွေ အဓိကလေ ထားကုရမှာဆိုတော့လည်း လာဟေ့ ဆရာမလေး လာဟေ့ လက်ထောက်ဆရာဝန်ညီလေး ငါတို့ နှလုံးပြန်နှိုးကြည့်ကြစို့ ပထမ ခြောက်မိနစ်အထိက သိပ်မထူး …. အဲ … Read more
ဂျပန်ကနေ အစိုးရပြန်ခေါ်လာသူများထဲမှ အမျိုးသမီး (၂) ဦး Q မဝင်ဘဲ ထွက်ပြေး…
ဂျပန်ကနေ အစိုးရပြန်ခေါ်လာသူများထဲမှ အမျိုးသမီး (၂) ဦး Q မဝင်ဘဲ ထွက်ပြေး… တနေ့တနေ့ ကူးစက်မှုးများနေတဲ့ ဂျပန်ကပြန်သွားတဲ့ ၁၉၅ ဦးထဲက အမျိုးသမီးနှစ်ဦး Q မဝင်ပဲ လွှတ်မြှောက်သွားပါတယ် ။ ခရီးသည်အားလုံးရဲ့ ပစ္စည်းများကို Q ဝင်သူများနှင့်တပါတည်း ယူသွားပြီးပိုးသတ်ဆေးဖျန်း ပြီးမှာ ထုတ်ယူရန်ပြောဆိုသော်လည်း တချို့လူများရဲ့ ပုံးများ မှာ ပိုးသတ်ဆေးမဖျန်းပဲ သံရုံးနာမည်အသုံးပြုပြီး ထုတ်ယူသွားကြတာကိုများရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်မှ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေသော်လည်း ဘယ်သူသေသေ ဆိုတဲ့ ဝန်ထမ်းများရဲ့ ရိုးသားမှုမရှိခြင်းကြောင့် ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေကြဦးမှာပါ။ ယခု လေဆိပ်မှ လွှတ်သွားသူနှစ်ဦးမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးပါရှိလာလျှင် တခြားသူများဘ်ာလောက်ကူးစက်သွားမလဲဆိုတာ မတွေးဝံ့စရာပါ ။ လာခေါ်ထုတ်သွားတဲ့ တက္ကစီနဲ့ အိမ်စီးကားပုံများပါ တင်ထားပါတယ်။ ဦးနိုင်ငံလင်း ဆီကိုလည်းယခုပုံတွေ ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံများကို … Read more
ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ Case(14)​ ရဲ့အိမ်ပြန်ခရီး ဗီဒီယိုဖိုင်လေး….
ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ Case(14)​ ရဲ့အိမ်ပြန်ခရီး ဗီဒီယိုဖိုင်လေး…. လားရှိုးဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသနေသော ပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာ Case(14)​ ကျောက်မဲလူနာ​၏အိမ်အပြန်ခရီးပါ… ဗီဒီယိုဖိုင် ကိုအောက်ဆုံးမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်… ကိုဗစ် ရောဂါ သက်သာလို့ ဆေးရုံးကနေ ဆင်ခွင့် ရတာ ၃၁ဦးလောက်ရှိပါပြီ… တကယ် ဝမ်းသာရပါတယ် ဒီဗီယိုလေးကို ကြည့်ပြီ ကြည်နူးမူ တစ်ခုခု ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ဒီလူနာ ၁၄ ကတော့ အကြိမ်ကြိမ်သွေးစစ်ကြည့်ရာမှာ နက်ကတစ်အဖြေပဲထွက်တာကြောင့် နေအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ မြန်မာ နိုင် ငံ မှာ ပြန် လည် သက် သာ လာ သူ (၃၁)ဦး ရှိ လာ ပါ ပြီ..အ လား အ လာ ကေားင် တွေ နှင့် ရင် … Read more
သင့်ရဲ့လက်မ အရစ်လေးတွေမှ တစ်ဆင့် သိနိုင်မယ့် သင့်ရဲ့ အချစ်အကြောင်း
သင့်ရဲ့လက်မ အရစ်လေးတွေမှ တစ်ဆင့် သိနိုင်မယ့် သင့်ရဲ့ အချစ်အကြောင်း သင့်ရဲ့အချစ်ရေးကို ဖော်ပြနေတဲ့ သင့်လက်မရဲ့ ကြောင်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် A ပုံစံ သင့်က အချစ်ရေးမှာ သစ္စာရှိပါတယ်တဲ့။ တစ်ခါတစ်ရံ ချစ်သူအပေါ်မှာ သံသယကြီးမားတယ်။ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သင့်ရဲ့ အလုပ်နဲ့ ကျောင်းကိစ္စတွေတောင် လျစ်လျူရူနိုင်ပါတယ်တဲ့။ သင်က ဖုန်းခေါ်နောက်ကျရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ချိန်းထားလို့ နောက်ကြရင်ဖြစ်ဖြစ် အမြဲစိတ်ဆိုးတက်တယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ချစ်သူက သင့်ကို မကြာခဏ ကြောက်ရပါတယ်တဲ့။ B ပုံစံ သင့်က ဖြစ်ချင်တာတွေများပြီး အောင်မြင်မှု့ကိုပဲရရှိချင်တယ်။ သင့်ရဲ့ ချစ်သူမှာလည်း ဒီလိုစိတ် ထားမျိုးရှိတဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်တက်တယ်။ စိတ်ခံစားချက်များသောချစ်သူနဲ့ ဖူးစာဆုံနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အချစ်ရေးမှာ အဆင်မပြေမှု့တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းမှု့တွေ အများကြီး ကြုံတွေ့ရတက်ပါတယ်။ C … Read more
မိန်းကလေးအများစုမသိသေးတဲ့ ယောက်ျားတို့ဖောက်ပြန်တဲ့အကြောင်းများ …
မိန်းကလေးအများစုမသိသေးတဲ့ ယောက်ျားတို့ဖောက်ပြန်တဲ့အကြောင်းများ … ကျနော့်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် အိမ်ကပေးစားတာမဟုတ်ဘူး ချစ်လို့ယူထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်သူ့မှာရှိတယ် တစ်နှစ်ကျော်‌လောက်ပေါင်းပြီး ဒီကောင် နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဇယားကပ်ရော …။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကမျိုးစောင့်ဥပဒေတွေဘာတွေ မပြဌာန်းခင် လွန်ခဲ့တဲ့ 3နှစ်လောက်အရင်ကပေါ့ မိန်းမကသိတော့တငိုငိုတရီရီနဲ့ကွာရှင်းမယ်မပေါင်းဘူးလုပ်ရော၊သူ့ပတ်ဝန်းကျင် သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကပါ ဒီကောင့်ကို ရွံပြီးလုံးဝလက်မခံတော့ အဲဒီမယားအငယ်လေးနဲ့ တခြားမြို့မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီးနေတယ် …။ သူ့ပထမမိန်းမက ရိုးရိုးအေးအေး စက်ဆရာမ ကောင်မလေးက အလှကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ဖြူဖြူသွယ်သွယ် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်ချစ်စရာလေး၊ နောက်ယူလိုက်တဲ့ မယားငယ်က KTVကဆော်၊ သူ့ပထမမယားရဲ့ခြေဖျားမမီဘူး …။ ကိုယ်လဲသိသိချင်းက ဒီကောင့်ကိုရွံပြီးစကားမပြောဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်ပြီး 2နှစ်လောက်ကြာပြီးတော့ မန်းလေးသွားရင်းတစ်ရက်ဈေးချိုထဲမှာအမှတ် မထင် ဒီကောင်နဲ့ပက်ပင်း သွားတိုးတယ်။ (ဈေးထဲမှာ ပစ္စည်းတွေလာသွင်းတာတဲ့) ကိုယ့်ကိုအတင်းခေါ်ပြီး မုန့်လိုက်ကျွေးပြီး သူ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် သေချာပြောပြတော့မှ ကိုယ်လဲသိတော့တယ် …။ မင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာ ငါ့အလုပ်ကပြန်လာရင် ညနေ7နာရီလောက်၊ … Read more